Mpamatsy fantsom-baravarankely malalaka amin'ny seza telo finday amin'ny vidin'ny orinasa - ZNZK
Ny taranaka vaovaon'ny trano fidiovana banga, fitsitsiana rano be, famoahana avo lenta, fahombiazana avo lenta ary fitehirizana angovo, mora diovina. Varotra mivantana amin'ny varotra, teknolojia misy patanty fototra, miaina kalitao miavaka.
1. Fametrahana mora kokoa noho ny an'ny milina fanasan-damba. Ny sisa hataonao dia ny fampitaovana rano sy famatsian-jiro.
2. Omeo traikefa fampiasana azo tsapain-tanana azo ampitahaina amin'ny serivisy hotely kintana.
3. Be bika sy lamaody.
4. Madio sy madio ara-pahasalamana ny ao anatiny, manana fantson-drano fanasana lamba sy trano fidiovana ao anaty ary tsy misy jamba azo ampiasaina hanadiovana sy hadio.
5. Volavola azo ovaina mba hifindra toerana indraindray, raha misy izany.
6. mora ny fiverenana avo kokoa.
7. Manana fampiasa betsaka amin'ny toerana misy toerana mahafinaritra, toby fialantsasatra, sahan'olika, toeram-panorenana, fanavaozana ny tanàna vaovao.
Teo aloha: Mpamatsy tranofiara fantsom-baravarankely malalaka seza enina
Manaraka: 2021 tranofiara roa fidiovana tsara indrindra ho an'ny varotra finday amidy
Toilety avo lenta avo lenta
Toeram-pandehanana manala rivotra
Fantsam-panala vy tsy misy volo
Toeram-pivarotana vonjy taitra mamonjy rano amidy
Toeram-pivarotana vonjimaika mamonjy rano